Waxaa jira audio iyo video qaabab badan oo kala duwan halkaas, qalabka ugu (sida iPhone, iPad, iyo telefoonada Android, iwm) iyo barnaamijyada (sida Windows Media Player) waxaa uun la jaan qaada ah qaabab gaar ah oo yar. An AVI ama wmv movie ma ciyaari doonaan iPhone ah, tusaale ahaan, iyada oo aan la beddelay file MP4 ah marka hore.
In kasta oo ay magaca, Freemake Video Converter waa heer-galo app video tafatir ah. Waxaa qaban karto oo aan toosan hawlaha video tafatirka fudud, sida jarida, qoqobada, flipping, oo isku duwan videos galay mid ka mid file la saamaynta guurka. Waxa kale oo ay abuuri karaan sawir duubey la music soo jeeda. Users ka dibna ay awoodaan in ay geliyaan videos, kuwaas oo si YouTube.
Qeybta 1: dib u eegista Good of Freemake video Converter
Qeybta 2: Bad dib Freemake video Converter
Qeybta 3: Top 5 Freemake kale oo video Converter
Top 5 dib u eegista ka soo goobaha warbaahinta
1. Dib by Guide Tom ee
"Freemake Video Converter taageertaa boqolaal qaabab video, diinta filimada si ay u ciyaari karaa qalabka caanka ah sida iPad iyo telefoonada socda qoraalkii hore ee OS Android ah."
2. Dib u eegista ay Download.com
"Freemake Video Converter isku daraa video tafatirka iyo diinta ka galay hal codsi oo si fiican loo dhisay. Waxaa qoreysa design soo jiidasho leh, waxyaabo badan oo nooc file taageeray, iyo qalab tafatirka suubban video ah leh hawlgelin oo xiiso leh. Waxaad ka heli doonin qalado badan oo arrintan codsiga. "
3. Dib u eegista ay Softonic
"Freemake Video Converter waa Converter video weyn sababo badan, laakiin inta badan sababtoo ah waa si degdeg ah, hufan oo run ahaantii fudud in use.Under interface ah xunna loogu talagalay, Freemake Video Converter noo soo bandhigayaa iyadoo awood leh qalabka in aad ha loogu badalo video iyo DVD movies dhexeeya qaabab kala duwan, iyo sidoo kale la abuuro soo duubey iyo visualizations music. "
4. Dib u eegista ay Softpedia
"Freemake Video Converter waa aalad in encode karaa dhowr videos, files audio, sawirada, iyo DVD files inay kordhin kale."
5. Dib by About.com
"Freemake Video Converter waa video Converter free la design fudud iyo interface taageera tiro ballaaran oo ah qaabab la gelin, kuwaas oo dhammaantood waxaad ka arki kartaa qeybta hoose ee boggan. Waxaad jar kartaa video ah, ku dar subtitles, iyo xataa gubi files si toos ah u disc ah. "
Top 5 dib u eegista ka users
1. Dib by JamJar
"Tani waa qayb weyn oo ka mid ah software in aan isticmaalo off da 'iyo, waa ka wanaagsan yahay mid bixisay kale. Feature URL koollada, waa kaliya oo fantastik ah, baado waqti fiican. "
2. Dib u eegista ay Ninjaru70
"Aad iyo aad u fiican ayaan u isticmaashay kaliya oo ku saabsan qof kasta oo 9 kulan oo ka mid 10 waxa uu helo shaqo u samaysay si aad u fudud, si kastaba ha ahaatee, waxaa loo baahan yahay fudud heerka yara calculator iyo waxa ay noqon doontaa anfacaya haddii lahaa wax si ay u caawiyaan audio u hagaagsan, maxaa yeelay, waa suurtowdaa u leeyihiin in ay bedeli audio in filim. "
3. Dib u eegista ay Bobfromhull
"Ka dib markii isku dayaya dhowr converters freeware iyo shareware waxaan ka hellay badankood ahaayeen qolof leh oo aan daganayn. Tani waxay ka shaqaysaa si toos ah sanduuqa, falaa ku andacoonaya iyo mid deggan oo lagu kalsoonaan karo. "
4. Dib u eegista ay Hrwasp
"Ma waxaad ka heli kartaa wax badan ka sahlan alaabta. Alaabta Tani biil ah oo uu sameeyay wixii ay u dalacsiiyay. Waxaa jeclaada oo ku talin doonaan in macaamiisha oo dhan. "
5. Dib by Braverlady
"Freemake Video Converter waa super fududahay in la isticmaalo, si deg deg ah u shaqeeyo, iyo qabtaan shaqo heer sare ah."
1. Dib by Softonic
"Dhibaatada waxa ay tahay, ay timaado la bar ah furin raadinta in rakibtay iyo nafteeda ugu xidho in web browser KASTA habka ay martida u yihiin, xitaa marka aad si cad u sheeg MA si loo soo dajiyo sida bar raadinta ah."
2. Dib u eegista ay MalwareKillerS.com
"Bulshada online dhigayaa in Freemake Video Converter ku tiirsan tahay farsamo qaybinta caddaalad darro iyo ka heli kartaa gudaha your computer xaabo la codsiyada kale, taas oo keeni karo dhibaatooyin halis ah."
3. Dib u eegista ay tom'sHARDWARE
"Freeware ayaa ku rakibtay u FREEMAKE VIDEO Converter 4.1.3is loo isticmaalay sida qoriga ah si loo soo dajiyo ah (PUP) virus."
4. Dib u eegista ay ƻSPYWARE
"In badan oo jeer ah, Freemake Video Downloader muujinaysaa ilaa on computer ka soo baxay oo meel ka dibna badala page bilowga, default search engine, bogga tab cusub iyo goobaha kale."
5. Dib by BOTCRAWL
"Freemake Video Downloader sara u qaadayaa walaac ay sabab u tahay ururka barnaamijka ee la furin cid saddexaad, dhaqanka xeeladaha suuq akhlaaq daro, user go'doomo, iyo xiriirka dambiyada internetka ku lug leh xatooyo credit, lacag baad ah, iyo tuugada aqoonsiga."
1. Dib by Hellraiser
"Ma fursadaha ku filan oo ay reserved barnaamijka!"
2. Dib u eegista ay Christoffeson
"Anigu ma jecli sababtoo ah waxa ay u muuqdaan ma in ay si loogu badalo file a in si divxavi u ciyaari doonaa ciyaaryahanka DVD karin, waxaa loogu badalo doonaa oo kaliya in ay xvidavi .."
3. Dib u eegista ay herperdmiCy
"Malwarebytes ayaa sheegay in uu kaasi yahay fayrus."
4. Dib u eegista ay Matrix Leader
"Mar walba waxaan soo bixi barnaamijyo tayo leh ka MajorGeeks anigase way i disappoints in aanay aragto barnaamijyada xirka sida Freemake Video Converter oo si joogto ah posted on page ugu weyn ee loogu talagalay dadka si ay u soo bixi"
5. Dib by David H. Lipman
"Freeware hadda inta badan guraa la crapware. Mid ka mid ah oo kaliya ay tahay in la dheeraad ah taxadar in rakibidda "freeware" in ka fuliyeen dalalka aan loogu tala galay ma heli rakibay. "
Wondershare Video Converter Ultimate sida xaqiiqada ah waa kan ugu khayr oo dhan "dhammaan-in-ka mid ah 'qalab Converter DVD & Video in aad ka heli karto maanta. Sidoo kale waa gubi DVD ah en fiican in aad caawin doona si fudud si loogu badalo videos iyo Cajalado, xitaa badalo video in 3D, gubi video files si disc DVD, DVD folder, ama faylasha ISO.
Waxaa dajisay Wondershare.
Raac ciriqa sida hoos ku siiyo si ay u soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate.
30X si dhakhso ah, Video Conversion
Streaming Your Media TV sahlan ma
Taageerada DLNA Eebaha dhisay
Bedelka Video aan Cable USB
Edit, In kor loo qaado, iyo shakhsiyeeyo Media
Kala duwan oo ay ka buuxaan waafaqsan
Taageerayaan Import iyo Output qaabab:
AVI, wmv, MP4, MKV, FLV, 3GP, Mpg, 3D, 4K ... 150+ qaabab taageeray.
Gacan-jabis waa furan-il, multithreaded video transcoder- ka dhabayso warbaahinta dhijitaalka ah mid ka mid ah qaabka ay u kale, compressing files ee geedi socodka.
Waxaa dajisay gacan-jabis Project.
Raac ciriqa sida hoos ku siiyo si ay u soo bixi gacan-jabis.
Taageerada doorashada cutubka
Deinterlacing Picture, abuurka iyo gargaarka bani-
Live Video Kulanka Xiisaha Leh
MP4, MKV, MPEG-4, H.264, Theora, AAC, CoreAudio AAC (OS X keliya), MP3, Vorbis, AC-3 pass-marayo, DTS mari-marayo (MKV oo kaliya)
FFmpeg dhamaato, xal cross-boosteejo ah si ay u qoraan, diinta iyo qulquli audio iyo video. Waxaa ka mid ah libavcodec - maktabadda keentay audio / video codec.
Waxaa dajisay FFmpeg Project.
Raac ciriqa sida hoos ku siiyo si ay u soo bixi FFmpeg.
MEncoder waa lacag la'aan line amarka video kelmadaha, Deji, iyo qalab shaandhaynta sii daayay hoos License GNU Guud ee Dadweynaha. Waa walaalaha ah ee yar MPlayer iconMPlayer, oo aanay u karin oo dhan qaabab in MPlayer fahamsan galay qaabab kala duwan Tifaftirayaasha iyo uncompressed isticmaalaya codecs kala duwan.
Waxaa dajisay Project MPlayer ah.
Raac ciriqa sida hoos ku siiyo si ay u soo bixi MEncoder.
Kala duwan Wide ee qalabka wax soo saarka oo ay taageerayaan
VCD, DVD, MPEG-1/2 (ES / PS / PES / VOB), AVI, ASF, wmv, WMA, QT, MOV, MP4, faataxada, RealVideo, OGG, OGM, Matroska
5. Qof kasta oo Video Converter
Kasta Video Converter waa video Converter ugu caan ku tahay diinta video files u dhexeeya qaababka kala duwan, iyadoo si degdeg ah diinta xawaaraha iyo video tayo wanaagsan leh. Waxaa clip karaan qaybaha kasta oo optionally midowdo, una kla in ay sameeyaan filim hal abuur.
Waxaa dajisay AVCLabs.
Raac ciriqa sida hoos ku siiyo si ay u soo bixi kasta Video Converter.
Function Video tafatirka
Files audio Split ka videos
Taageerada Dufcaddii video diinta iyo dun badan.
Multilanguage waxaa lagu taageeray
AVI, FLV, Mpg, MP4, M4V (aan DRM), M2V, Jabbuuti, 3GP, 3G2, 3GPP, MOV, TS, TP, TRP, M2TS, MTS, MKV, DV, wmv, mod, TOD, ASF, DAT, F4V, VOB, dhexena, RMVB, DivX, XviD, MXF, H.261, H.263, H.264, lowska, NC, NSV
> Resource > Top List > Freemake dib u eegista video Converter oo kale oo